प्रधानमन्त्रीलाई फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गरेर भेलामा आउन शाक्यको आग्रह – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
प्रधानमन्त्रीलाई फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गरेर भेलामा आउन शाक्यको आग्रह
४ चैत्र, २०७७ १९:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फागुन २८ गते गरेको निर्णय फिर्ता गरेर भेलामा आउन आग्रह गरेकी छिन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित नेकपा खनाल- माधव समूहको राष्ट्रिय भेलामा नेतृ शाक्यले यस्तो बताएकी हुन्।
‘कमरेड केपी ओलीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, फागुन २८ गतेको निर्णय जुन गुटको भेला विधान विपरितको भेला गरेर अध्यक्ष र महासचिव मात्र राखेर हामी सबै पदाधिकारीलाई हटाउनु भयो। के यो विधानसंवत छ? त्यो २८ गतेको गुटको भेलाबाट गरेको निर्णय फिर्ता गरेर यो भेलामा आइदिनुहोस्। हामी विभाजित एमाले बनाउन चाहदैनौं,’उनले भनिन्।
नेतृ शाक्यले एमालेले भेला गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पीडा भएको भन्दै आक्रोश पोखिन। उनले भनिन्, ‘हामीले भेला आयोजना गर्दा बालुवाटारलाई पीडा भएछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भेलामा जानेलाई कारवाही गरिने भन्नु भएछ। त्यति मात्रै नभएर महासचिवद्वारा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएछ।’
नेकपा एमालले आयोजना गरेको भेलामा आउन कसैले डराउनु नपर्ने भन्दै शाक्यले ढुक्क भएर भेलामा आउन आग्रह गरिन्। उनले यो भेला गुटको नभएर एमाले पार्टीले भएको जिकिर गरिन्। ‘यो गुटको भेला होइन। कम्युनिस्ट पार्टी एमालले आयोजना गरेको भेला हो।यो भेलामा महत्वपूर्ण सुझाव र विचार दिनुहोला,’ उनले भनिन्।
एमालेले भेला गर्दा हामीले डराउनुपर्ने धम्की खानुपर्ने भन्दै यसको निन्दासमेत गरिन्। ‘हामी पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं। सुदृढ बनाउन चाहन्छौं। एकिकृत र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौं। आज यो उद्देश्य लिइरहँदाखेरी भेलामा आउन डराउनुपर्ने? धम्की खानुपर्ने। यसको घोर निन्दा गर्न चाहन्छ। निन्दा गर्न चाहन्छु।’
यसअघि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर बादललाई बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए।